पहिला कृषिको आधुनिकीकरण, अनि पाउँछन् युवाले समृद्धि ! - पहिला कृषिको आधुनिकीकरण, अनि पाउँछन् युवाले समृद्धि !
पहिला कृषिको आधुनिकीकरण, अनि पाउँछन् युवाले समृद्धि !
२०७५, २6 भदौ, 03:38:51 AM
पोखरा । कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको बेला कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ ढिकुरपोखरीका युवा कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत समृद्धिको खोजीमा लागेका छन् । बाँझिएका जग्गाको उपयोग गर्दै पशुपालन, तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक खेती गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ उनीहरु सक्रिय बनेका छन् ।
सिमसिम्ले नेपाने बहुउद्देश्यीय कृषि फार्ममार्फत युवाले उक्त योजना अघि सारेका हुन् । बाँझा जग्गामा व्यावसायिक खेती गरी बढ्दो बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने अभियान थालिएको सो कृषि फार्मका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुगाईंले बताए ।
“सिमसिम्ले नेपाने क्षेत्रको तीन हजार २०० रोपनी जग्गा भाडामा लिई बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक कृषि अभियान बढाउने सोचमा छौँ”, उनले भने, “हाल २०० रोपनी जग्गा वार्षिक प्रतिरोपनी रु एक हजार ५०० का दरले २५ वर्षका लागि भाडामा लिई काम थालेका छौँ, आवश्यकताअनुसार क्षेत्र बढाउँदै लैजाने लक्ष्य छ ।”
समाजका ज्येष्ठ नागरिकको अविभावकत्व र निर्देशन, युवाको क्रियाशीलता, साविक ढिकुपोखरी गाविस–१ भित्रका सर्वसाधारण मात्र संस्थापक शेयर सदस्य बनाई प्रतिसदस्य रु ५१ हजार शेयर रकम कायम गरिएको छ ।
कृषि फार्मका उपाध्यक्ष शिव अधिकारीका अनुसार संस्थामा हाल १९८ शेयर सदस्य आबद्ध छन् । पशुपालन र व्यावसायिक तरकारीखेती एकसाथ अगाडि बढाउने क्रममा आधुनिक गोठ निर्माण गरी ३८ माउ लैना भैँसी पालिएको र १५ माउ लैना भँैसी थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।